ပင်မစာမျက်နှာ တောင်အမေရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဘရာဇီးဘောလုံးကစားသမားများ ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးနာမတော်ဖြင့်လူသိများသည်သူတစ်ဦးဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Genius တစ်ဦးအပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက် "ဒန်"။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်ယနေ့အထိသူ့ရဲ့ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ဆီသို့ထူးဆန်းသောဖြစ်ရပ်များတစ်ဦးအပြည့်အဝအကောင့်တတ်၏။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုနောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်, သူ့ကိုအကြောင်းကို (နည်းနည်းလူသိများ) များစွာသောအခြား OFF-အသံအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းကသူ့ကျောက်တောင်မျက်နှာအသွင်အပြင်အကြောင်းကိုသိတယ်။ သို့သျောလညျးကိုသာအနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဒန်နီလို da Silva ရဲ့ဇီဝအကြောင်းအများကြီးကိုငါသိ၏။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ် ado ခြင်းမရှိဘဲ, ရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ချွတ်စတင်ခြင်း, မိမိအမည်အပြည့်အစုံဒန်နီလို Luiz da Silva သည်။ သူ 15th သူ၏မိခင်မာရီယာဟိုဆေးဒါဆေးလ်ဗားထံသို့ဇူလိုင်လ 1991 ၏နေ့နှင့်အဖေ, Bicas အတွက်ဟိုဆေး Luiz da Silva သည် Mina Gerais ၏ပြည်နယ်အတွက်ဘရာဇီးမြို့တော်စည်ပင်ကရက်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
ဒန်နီလို Bicas, မြောက်ဘက် Rio de Janeiro မြို့၏အကြောင်းကို 13,000 သူမြို့သားများနှင့်အကြမ်းအားဖြင့်3နာရီနဲ့စည်ပင်သာယာမှာကြီးပြင်း။
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံအဖြစ် Bicas အများအားဖြင့်အီတလီရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်အနည်းငယ်တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုအချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အလုပ်ရှာဖွေရေး Start ကို
ငယ်ရွယ်ဒန်နီလိုဘို့, တစ်ဦးဘောလုံးသမားဖြစ်လာရန်မိမိအရှာပုံတော်သူဒဏ္ဍာရီထံမှလက်ခံရရှိတွန်းအားမှတဆင့်သို့ရောက်လာသော Edson Arantes Nascimento ပြုပါ အဖြစ်လူသိများသူ Pele.
တဦးတည်းရဲ့ခြေထောက်ပေါ်ဘောလုံးလည်းမရှိသည့်အခါအနတ္တအဆုံးသတ်တဲ့မြို့မှာကြီးပြင်းဘဲလျက်, ကအစားကျောင်းသို့သွား၏ဘောလုံးရွေးချယ်ဖို့ငယ်ရွယ်ဒန်နီလိုများအတွက်လွယ်ကူသောဖြစ်ခဲ့သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့, ဒန်နီလိုသူအလေးအနက်ထားဘောလုံးယူအချိန်တွင် 13 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ ဘောလုံးသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်သူ့ကိုသူ၏အခွက်တဆယ်တခုအဖြစ်ဖို့ဇာတ်စင်ပေးတဲ့သူကသူ့ဒေသခံလူငယ်အသင်း, Tupynambásမှာစာရင်းသွင်း 2004 အတွက်သူ့ကိုမြင်တော်မူ၏။ ကလပ်မှာနေစဉ်, သူ၏စံပြ၏ကုန်သွယ်ရေးနှင့် Two-အချိန်ကမ္ဘာကြီးခွက်ကိုဆုရှင်သင်ယူခြင်း Cafu အဘယ်သူ၏ display တွေဘယ်လောက်ပိုကောင်းသည်သူ၏ရပ်တည်ချက်ကိုကစားရန်သူ့ကိုသင်ပေးတယ်။
Tupynambásမှာအားလုံးဘောလုံးကွင်းရာထူး outgrowing ၏နှစ်နှစ်ပြီးနောက်, ဒန်နီလိုပိုပြီးယှဉ်ပြိုင်ဘောလုံးကစားရန်လိုအပ်ကြောင်းခံစားရတယ်။ သူ Belo အလျားလိုက်မှာတည်ရှိပါတယ်América Mineiro လူငယ်ခြမ်းသို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒန်နီလိုအောင်မြင်တဲ့လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြီးစီးဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြလို့တစ် Springboard အဖြစ်ကလပ်ကိုမြင်တော်မူ၏။
ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -Fame မှထလော့
18 ၏အသက်အရွယ်မှာဒန်နီသည်သူ၏လူငယ်ကစားသမားဘပြီးစီးခဲ့နဲ့အမေရိကန် Mineiro အကြီးတန်းခြမ်းမှရာထူးတိုးတယ်။ သူဟာကလပ်များအတွက်အရေးကြီးသောပန်းတိုင်များသွင်းယူပြီးနောက်အားလုံးအကြီးတန်းဘောလုံးရာထူးအထက်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ဘရာဇီးကုမ္ပဏီကြီးဆန်းတို့တောင်းဆိုသည် လာ. ရှေ့တော်၌အဘယ်သူမျှမအချိန်ကိုယူ။ ဆန်းတို့စမှာဒန်နီရဲ့ဥက္ကာမြင့်တက်ညာဘက်အချိန်တွင်ရောက်လာတယ်။ ဒါဟာသူက 2011 Copa Libertadores (အနိုင်ရသောရည်မှန်းချက်သွင်းယူတဲ့အချိန်က လာ. ,အဆိုပါ UFA ချန်ပီယံလိဂ်ဖို့တောင်အမေရိကနှင့်ညီမျှ - 1963 ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်) ။ အောက်တွင်သည်သူ၏ Copa Libertadores ဘုန်းအသရေအတွက်နုပျိုစူပါဒန်နီလို၏ဓာတ်ပုံဖြစ်ပါသည်။
အတူအဆိုပါ Copa Libertadores အနိုင်ရကတည်းက နေမာ (ထိုဖလားနှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ), ကျော်ကြားမှုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဒန်နီရဲ့စွမ်းရည်ကိုသူဘောလုံးကိုင်တွယ်လမ်းကိုတိုက်ရိုက်အချိုးကျဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤသည်မှာလည်းအများအပြားဥရောပအသင်းများကိုအထံတော်၌အသိပေးစာကိုယူမယ့်အချိန်ပဲ။ အဆိုပါ 2012 ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့ပြတင်းပေါက်မှာအဖြစ်, ဥရောပကနေကလပ်ကသူ၏န်ဆောင်မှုများအတွက်တောင်းဆိုစတင်ခဲ့သည်။ ၏လေးလံသောလွှတ်ပေးရန်အပိုဒ်နေသော်လည်း € 50 သန်း သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ထားရှိ, FC အသင်း Porto ကြီးမားကျယ်ပြအပိုဒ်နှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း, သူ့ကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ရှေ့ဆက်သွား၏။ ဤသည်ကသူ၏ဥရောပအိပ်မက်မှတဆင့်သို့ရောက်လာသည်ကိုမည်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျန်ရှိနေသော, (Real Madrid အသင်းနှင့်မန်စီးတီးမှာအချိန်) သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
တိုင်းအကြီးလူကိုနောက်ကွယ်မှာရှိတစ်ဦးအကြီးအမြိုးသမီးတင်, ဒါမှမဟုတ်နိုင်အောင်စကားကိုတတ်၏။ အောင်မြင်တဲ့ဒန်နီလိုနောက်ကွယ်မှ, အကြာတွင်ခစျြဇနီးလှည့်တဲ့သူ Clarice အရောင်း (သူမ၏ယောက်ျားနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံ) ၏လူတစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးအောင်မြင်ကျော်ကြားပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့လူငယ်လေးတွေရည်းစားတစ်ချိန်ကရှိ၏။
နှစ်ဦးစလုံးချစ်သူများလက်မထပ်မီတစ်ဦးကလေးရှိသည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ သူတို့ကသူတို့၏သား, ဧပြီများ၏ 9th အပေါ် Miguel, 2015 ရှိခဲ့ပါတယ်။ အောက်တွင်ဒန်နီသည်သူ၏လှပသောဇနီးနှင့်အတူဖြစ်ပြီးအသစ်သည်သူ၏အဖေကနေလာမယ့်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးကျင်းပနေမှ Miguel မွေးဖွား။
အတူတကွဖြစ်ခြင်း၏7နှစ်ကြာပြီးနောက်ဒန်နီနှင့် Clarice အရောင်းနောက်ဆုံးတော့ကထုံးချည်နှောင်ဖို့အချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်ခံစားရတယ်။ သူတို့ဟာ Bicas, ဘရာဇီးအတွက်ဇွန်လ 17 ၏ 2017th နေ့၌လက်ထပ်တယ်။
ဒန်နီနှင့် Clarice နှစ်ဦးစလုံးသိပ်အစောပိုင်းသူတို့စီစဉ်ထားခဲ့သောရက်စွဲထက်သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ကအစပိုင်းတွင်ဇွန်လ 30, 2017 ၎င်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားနေ့စွဲစီစဉ်ထားပေမယ့်အမှန်တကယ်မင်္ဂလာဆောင်သည့်ရက်စွဲမတိုင်မီ 17 ရက်ပေါင်းခဲ့သောလ 13 နေ့၌ဖြစ်ပျက်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
အောက်တွင်အတူတကွသူတို့၏သား, မှ Miguel နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မင်္ဂလာဆောင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြင်ကြသည့်အတိုင်း, တစ်ခဲပြုံးဒန်နီအပါအဝင်အားလုံးမိသားစုဝင်များဧရာမင်္ဂလာဆောင်ကိတ်မုန့်သည်ထက်တိုတောင်းကြည့်ပါ။
ဒန်နီလိုသူ့သားမှ Miguel (အောက်တွင်ပုံ) ကိုဒန်နီလို Luiz da Silva မိသားစု၏ဒုတိယဘောလုံးမျိုးဆက်ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့ယုံကြည်သည်။
ဒန်နီရဲ့လူနေမှုပုံစံ: တစ်သံသယမရှိဘဲ, ကတဦးတည်းကသူ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ပိုကောင်းတဲ့ပြီးပြည့်စုံသောရုပ်ပုံလွှာတည်ဆောက်ကူညီပေးနိုင်ဒန်နီရဲ့လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ဒန်နီလိုအတူတကွအရည်အသွေးကောင်းအချိန်ခံစားအတော်လေးမကြာခဏတွေ့ရှိခဲ့ပြီ။
ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ
ဒီရလဒ်အဖြစ်ဒန်နီလိုတစ်ဦးသုန်မှုန် attribute ကိုရှိနိုင်တယ်လို့သူတစ်ဦးအဖြစ်မှားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်နက်ရှိုင်းသောဆင်းထွန်ယက်ရာတွင်, ငါတို့သည်သင်တို့သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် ပတ်သက်. အချို့အချက်အလက်များပေးပါ။
ဒန်နီ (အများအားဖြင့်သူ့ဇနီးမှ) သစ္စာစောင့်သိ, (ချွတ်နှင့်အစေးအပေါ်) အလွန်အမင်းစိတ်ကူးယဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ likes အဘယ်အရာနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အတိုင်းဒန်နီလိုအိမ်မှာ-based ဝါသနာတစ်ခုပန်ကာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသူသည်ရေကိုအနီးရှိအပန်းဖြေခြင်းနှင့်မိသားစုနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးမုန့်ညက်ရှိခြင်းမှချစ်တော်မူ၏။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူ၏လက်ရုံးပေါ်လက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးထိုးခြင်း၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုသူကကက်သလစ်မိသားစုနောက်ခံကနေလာအကြံပြုထားသည်။
သူနှစ်သက်မှုမရှိသောအရာကိုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်အတိုင်းဒန်နီလိုသူစိမ်းတွေနဲ့အဆင်ပြေမခံစားရပါဘူး။ သူကသူ့မိဘများ၏ဆိုဝေဖန်မှုများနှစ်သက်မှုမရှိခြင်းနှင့်အများပြည်သူအားမိမိပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝအလွန်းထုတ်ဖော်ပြောဆို။ စာအရေးအသား၏ထိုအချိန်ကအမျှနည်းနည်းသူ့အစ်ကို (s), အစ်မ (s), ဘထွေး (s) နှင့်အဒေါ် (ies) အကြောင်းကိုလူသိများသည်။
ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏ထိုအချိန်ကအဖြစ်, ချမ်းသာတဲ့လူကိုသူသည်ဒန်နီကျော် $ 21 သန်းခန့်မှန်းခြေအသားတင်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ Cafu သည်သူ၏စံပြဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းဒန်နီလိုတစ်ချိန်ကသူ၏စကားထဲတွင်အောက်ပါအလေးပေးခဲ့;
ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ယောက်ျားသည်ဖြစ်၏။ ငါသည်ငါ့ကိုယ်ပိုင် attribute တွေရှိသည်ကြောင့်ငါမည်သူမဆိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မနှိုင်းယှဉ်ပါလိမ့်မယ်။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားနေစစ်ဆေးခြင်း: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒန်နီလို da Silva ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ဖတ်နေဘို့။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် !.
ရောဘတ် Firmino ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Richarlison ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်